स्वाब दिदै बजारभरी लखरलखर डुल्दै ! - सिम्रिक खबर
लिड्स यूनाइटेडलाई ३-१ गोलले हराउँदै चेल्सी शीर्ष स्थानमा हेर्नुहोस् मंसिर २१ गते आइतवार डिसेम्बर ६ तारीखको राशिफल, भगवान शिवले सबैको रक्षा गरुन् युटुबले अब भिडियोमा नराम्रा कमेन्ट लेख्न नमिल्ने फिचर ल्याउँदै कोरोना लागेर परीक्षा छुटेको कक्षा १२ को विद्यार्थीले परीक्षा दिन पाउने जो बाइडनले पदभार ग्रहण गरेको एकसय दिनसम्म मास्क लगाइराख्न नागरिकलाई आग्रह सून्यदेखि ८० प्रतिशत चार्ज केवल १८ मिनेटमा हुने इलेक्ट्रीक कार बनाउँदै हुन्डाई
स्वाब दिदै बजारभरी लखरलखर डुल्दै !
लापरबाहीले कोरोना फैलिँदै, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा कठिनाई
काठमाडौं : स्वाब परीक्षण गराउनुको अर्थ आफैंलाई कोरोना संक्रमण छ कि भनेर सशंकित हुनु हो। त्यसैले परीक्षणको नतिजा नआउन्जेल सम्बन्धित व्यक्तिले कम्तीमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। तर, अवस्था ठीक उल्टो छ। स्वाब दिएर परिणाम नआउञ्जेल भेटघाटमा रमाउने धेरै छन्। नतिजा पोजेटिभ आउनेले त्यहीबीच थुप्रैलाई सारिसकेका हुन्छन्।
‘स्वाब दिएर नतिजा नआउँदै एक जनाले त १३ सय जनालाई भेटिसक्नुभएको रहेछ’, सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा हालै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले यसबारे दुःखेसो गरे, ‘ती मान्छे खोज्दाको हैरान भयो। कम्तीमा घरमै बसिदिएको भए राज्यको साधन, स्रोत र शक्ति जोगिन्थ्यो। यस्ता घटना धेरै छन्।’
कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएकाहरूलाई सरकारले दिनहुँ खोजी गर्छ। तर, संक्रमितहरू नै लुक्ने वा ढाँट्ने क्रम पनि उत्तिकै छ। त्यसले सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जटिल बन्दै गएको छ। संक्रमणको जोखिम झन्झन् बढेको छ।
संक्रमित पुुष्टि भएका व्यक्तिसँग सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिको खोजी गर्नु नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो। दिनहुँ झन्डै ६ सय संक्रमित पुष्टि हुन थालेका छन्। संक्रमणको पुष्टि भएकामध्ये कतिपयले मोबाइल बन्द गरेका छन्। कतिपयले गलत नम्बर लेखेका र कतिपयले फोन उठाए पनि आफ्नो परिवारका कसैले पनि स्वाब परीक्षण नगरेको बताउने गरेको ट्रेसिङमा संलग्न एक स्वास्थ्य अधिकारीले जानकारी दिए।
संक्रमितसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको खोजबिनका लागि अहिले हरेक गाउँपालिकामा १, नगरपालिकामा २, उपमहानगरपालिकामा ३, महानगरपालिकामा ५ टिम बनाइएको छ। तैपनि त्यस्ता व्यक्ति सम्पर्कमा आउन हिचकिचाउँछन् वा खेलाँची गर्छन्।
संक्रमितको संख्या वृद्धि भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूलाई २० प्रतिशत बेड छुट्ट्याउन निर्देशन दिएको छ। तैपनि संक्रमितहरू बेपत्ता छन्।
कसरी खोजिन्छ ?
स्वाब परीक्षण गर्नुअघि भराइने फर्ममा नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। पोजेटिभ देखिएमा नजिकका स्वास्थ्यकर्मीले फोन सम्पर्क गरी जानकारी दिने गर्छन्। संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था बुझेपछि होम आइसोलेसनको मापदण्डअनुसार घरमै बस्न सक्छ भने त्यसलाई नै प्रेरित गरिन्छ। यदि घरमा बस्न सम्भव नभए एम्बुलेन्स पठाइन्छ। ती व्यक्ति १४ दिनसम्म कहाँ कहाँ गए अनि ककसलाई भेटे खोजिन्छ। मास्क नलगाई १५ मिनेटभन्दा बढी समय एकै ठाउँमा कोकोसँग बसे, पहिचान गरिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, कुनै पनि संक्रमित व्यक्तिले १५ मिनेटसम्म बिना मास्क अर्को व्यक्तिसँग उठबस गरेको छ भने भाइरस सर्ने सम्भावना झन्डै शतप्रतिशत हुन्छ।
स्वाब परीक्षणपछि बेपत्ता
कोरोना संक्रमण बढी देखिएको बाँके जिल्लामा १२ संक्रमित बेपत्ता छन्। गत साउन २२ गतेदेखि ३ दिनसम्म स्वाब संकलन गरिएकाहरूमध्ये १२ जना सम्पर्क बाहिर रहेका छन्। उनीहरू २ वर्षका बालकदेखि ४५ वर्षसम्मका छन्।
स्वाब परीक्षणपछि बेपत्ता हुने संक्रमित काठमाडौंमा समेत छन्। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाअन्तर्गत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ७ वटा समूह छ। उक्त समूहले बेपत्ता संक्रमित सबैको पत्ता लगाउन सकेको छैन।
यही समूहअन्तर्गत एक टिमका संयोजक डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, लकडाउनको अवधिमा नयाँ संक्रमितको संख्या थोरै हुने भएकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सजिलो हुन्थ्यो। औसतमा कम्तीमा १६ देखि ५० जनासम्मलाई कन्ट्याक्टमा ट्रेसिङमा फेला पार्न सकिन्थ्यो। तर अहिले संक्रमितको संख्या ६ सयको हाराहारीमा पुग्न थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार, शुक्रबार मुलुकभर ५ सय ९४ नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्षसमेत रहेका डा. बुढाथोकीले भने, ‘लकडाउन खुलेपछि संक्रमितको संख्या सीमित रहेन। संक्रमित बढ्दै जाँदा सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा सम्भव नै छैन। संक्रमित बिहान उठेपछि बस चढेको होला। कार्यक्रममा गएको होला। जुलुसमा गएको होला। अस्पताल गएको होला। कहाँ कहाँ गयो र को कोसँग सम्पर्कमा रह्यो सबैलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको दायरामा ल्याउन सम्भव नै हुँदैन। अहिलेको जोखिम पनि त्यही हो।’
कोरोना संक्रमणको पुष्टिपछि विभेद गर्दा धेरै आफूलाई संक्रमण भएको लुकाउने गरेका छन्। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे संक्रमणको पुष्टि भएपछि समाजमा दुर्व्‍यवहार हुने डरका कारण कतिपयले रोग लुकाउने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन् ‘संक्रमणको पुष्टि भएपछि एम्बुलेन्स लिन पठाउँदा पनि छिमेकीले थाहा पाउँछन्। आफैं आउँछु भन्ने पनि पाइएका छन्।’
डा. बुढाथोकीका अनुसार, संक्रमितलाई दुर्व्‍यवहार गर्ने चलन गाउँघरमा बढी देखिन्छ। त्यसकारण पनि संक्रमित र शंकास्पद व्यक्तिले खुलासा गर्न चाहँदैन। ‘कोरोना भएको व्यक्तिले आफ्नो क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेको साथीको नाम नै लिँदैन। केटा साथीले केटी साथीको नाम लिँदैन। केटी साथीले केटा साथीको नाम लिँदैन। धेरै नै कन्भिन्स गर्नुपर्छ’, उनले भने।
संक्रमण भएको पुष्टिपछि सर्वसाधारण मात्र होइन चिकित्सकलाई समेत दुर्व्‍यवहार भएको पाइएको छ। चितवनस्थित रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. विश्वबन्धु बगालेलाई कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि जनप्रतिनिधिसहित छिमेकीले दुर्व्‍यवहार गरेका छन्। सोमबार कोरोना संक्रमणको पुष्टिपछि होम आइसोलेसनमा बसिरहेका डा. बगालेकी पत्नीमा पनि कोरोना पोजेटिभ पाइएको छ। शुक्रबार बिहानै भरतपुर महानगर— ४ का वडाध्यक्षसहितको टोल सुधार समितिका पदाधिकारीहरू आई कोरोना संक्रमितको घर लेखिएको ब्यानर टाँस्न पुगेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम गाउँघर, सहरबजारमा अझैं पनि समूहसमूहमा होटल एवं पसलमा बस्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। घरमा पाहुनपाछा लाग्ने तथा आफैं पनि पाहुना बन्न जाने जस्ता हेलचेक्र्याइँ गर्दै आएको अवस्था छ। यस्तो व्यवहारले कोरोनाको जोखिम बढ्छ।
आफूबाहेक अरू सबै संक्रमित हुँ भन्ने सोंचेर व्यवहार गर्नुपर्ने डा. गौतमको सुझाव छ। ‘लक्षण देखिन पनि सक्छ। नदेखिन पनि सक्छ। त्यही भएर आफूबाहेक सबै संक्रमित छन् भन्ने सोच राखी आवश्यक नपरी घरबाट बाहिर निस्कन हुँदैन। निस्कन परेमा पनि मास्क लगाउने र भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्छ’, डा. गौतमले भने। आजको अन्नपूर्णले लेखेको छ।